Warbixin Caalami Ah Oo Sharraxday Horumarka Iyo Caqabadaha Horyaalla Ciyaaraha Somaliland+SAWIRRO – somalilandtoday.com
Warbixin Caalami Ah Oo Sharraxday Horumarka Iyo Caqabadaha Horyaalla Ciyaaraha Somaliland+SAWIRRO
(SLT-Hargeysa)-Idaacadda BBC-da ee dunidda la hadasha qaybteeda ciyaaraha, ayaa maanta warbixin ka qortay Akaadami dhinaca ciyaaraha ah oo laga furay Hargeysa, kaasi oo qorshuhu yahay in mustaqbalka laga soo dhiso xul qaran oo ay yeelato Somaliland.
Warbixintaas oo uu qoray Weriye ciyaaraha qaabilsan oo la yidhaahdo Robert Kidd, ayey Wakaallada Wararka Somaliland ee SOLNA ka soo xigatay warkan oo si qoto-dheer tafaasiil uga bixiyey horumarinta ciyaaraha Somaliland iyo caqabadaha horyaalla, waxaana ay u qornayd sidan:-
“Carruurta ku ciyaaraysa waddooyinka magaalada Hargeysa, waxay ku hamiyeyaan inay maalin uun metali doonan dalkooda oo aan la aqoonsan.
Somaliland waxay leedahay baasaboor iyo lacag u gaar ah iyo calan ka ba’banaya Baarlamaanka Somaliland, halka madaxweynaha Somalilandna lagu soo doorto doorasho dimuqraadi ah oo xasilloon.
Bishii Feberwari ee sannadkan dhallinyaro qurbajoog ah ayaa Somaliland ka furay Akaadamiga Kubadda Cagta Somaliland (Somaliland Football Academy), waxaana aasaasayaasha Akaadamigani kala yihiin Axmed Cali iyo Maxamed Siciid oo ka yimmi Birmingham iyo Cabdisalaan Axmed iyo Xuseen Aadan oo ka tagay London.
Axmed Cali ayaa sheegay Somaliland in wax kasta laga soo bilaabayo hoosta, waxaanu tilmaamay in doonayaan sidii maalin uun ay u samayn lahaayeen xul qaran oo ay yeelato Somaliland.
Warku wuxuu intaas ku daray in dhallinyarada aasaastay Akaadamiga Ciyaaraha Somaliland ay booqasho ku tageen Somaliland oo dhan,isla markaana ay carbiyeen 132 tababare, halka ay qaateen 1,600 oo ciyaar-yahan. Akaadamiga Kubadda cagta Somaliland ayaa warbixintu xaqiijisay inuu ku tiirsan yahay deeq ay ka heleen West Brom oo siisay agabka tababarka iyo qalab ciyaareed kale.
Axmed Cali wuxuu sheegay inay rejo u abuureen da’yarta oo ka joojinayaan tahriibka oo tiiraanyo ku hayey hooyooyin badan.”